Home / Interior design / Inona ny tohatra mihodina vy?
2021 / 05 / 27 FisokajianaInterior design 7899 0
Raha ny sandan'ny tohatra no resahina, tsy maintsy resahintsika ny "tohatra mihodina". Amin'ny maha ivon'ny fifandraisana eo amin'ny habakabaka dia rohy fandihizana izy io.
Tsy vitan'ny mifanaraka tsara amin'ny fampiasa azy manokana, fa lasa ampahany amin'ny habaka na koa ny fifantohana, manome ny toerana mihoatra ny sary an-tsaina ny estetika hita maso.
Na izany aza ry zalahy, henoko fa ny tohatra mihodinkodina anao dia mbola mampiasa rafitra mivaingana nohamafisina? Tao anatin'izay taona vitsivitsy lasa izay, nanjary malaza ny mampiasa tohatra mihodinkodina vy! Androany isika dia hiresaka momba ny tohatra vy mihodina amin'ny teboka manaraka.
Famaritana ny tohatra mihodina vy
Ny toetoetran'ny tohatra mihodina vy
Karazan-tohatra mihodina vy
Fampiharana tohatra mihodina vy
Ny tohatra mihodina dia anarana iraisan'ny tohatra miolakolaka (curve, arc, sns.). Ary ny tohatra miolakolaka miaraka amin'ireo mpikambana vy no tena manohana azy amin'ny rafitra vy dia ny tohatra mihodina.
Raha miresaka momba izany ianao, dia mety hanontany ny sasany aminareo, manao ahoana ny halehiben'ny tohatra vy mihodina? Ahoana ny fampiasana amin'ny trano mihaja, efitrano fampirantiana, fitsangantsanganan'ny zavakanto… ireo toerana avo be ireo ah? Ny zavatra tsara indrindra dia ny ahafahanao mampiasa vy sy beton hanamboarana tohatra tsara tarehy.
▲ Ny tohatra mihodina vy izay noeritreretinao
Raha mieritreritra ianao fa ny tohatra mihodina ihany miaraka amin'ny singa rehetra vita amin'ny vy dia antsoina hoe tohatra mihodina vy, dia tsy afaka milaza aminao fotsiny aho fa izay eritreretinao dia izay eritreretinao ihany.
Raha ny tena izy, raha mbola ny tena vatan'ny rafitra (manondro ny andry sy ny tsanganana) dia ny firafitry ny vy ny tohatra miolikolika dia antsoina hoe tohatra vy mihodina.
(Fanamarihana: ny firafitry ny tohatra misy tohatra miaraka amin'ny firafitry ny enta-mavesatra lehibe dia tsy resahina amin'ity atiny ity)
Ny takelaka fanosorana, ny arofanina, ny lalantsara ary ny singa tsy mitondra entana lehibe hafa, raha toa ka mahafeno ny fenitra famaritana fenitra nasionaly izy ireo, dia afaka misafidy vy, fa koa vera, hazo, marbra, veneer aluminium, vy vita amin'ny plastika ary fitaovana hafa.
Na dia vita amin'ny vy aza ireo singa mitondra enta-mavesatra rehetra, dia azo ampiasaina hanamafisana endrika ny endrika sy hahitana vokatra tsara indrindra ny sehatra haingon-trano isan-karazany.
Endri-javatra amin'ny tohatra mihodina vy
a, Mahery sy mateza, tsy mora ovaina
Ny vy dia manana tanjaka sy hamafisana, rafitra miorina, fahafaha-mitondra enta-mavesatra, fizarana raikitra ary tsy mora ovaina.
b. Fampiharana malalaka
Ny rafitra firafitry ny vy dia mahazaka ny lanjany tsy miankina ary tsy voakasiky ny firafitry ny fananganana toy ny tsanganana sy ny gorodona, noho izany dia azo ampiasaina amin'ny faritra anatiny sy ivelany izy.
c.Vari-karazany ny endrika sy ny curvature
Ny singa amin'ny firafitry ny vy dia maivana sy mahia, izay afaka mamorona fomba maivana sy be rivotra ary mailaka ary koa mavesatra sy milamina. Mandritra izany fotoana izany, ny curvature dia mety tsy hisy fiantraikany amin'ny endrika firafitry, hyperbolic, parabolic ary karazan-tsoroka hafa azo tanterahina.
d.Fandraisana asa kely sy fananganana mety
Ny habaka kely nozahana dia mitahiry toerana malalaka hampiasana azy, ary ny fametrahana mora dia mety hanafohezana ny fotoana fananganana.
Amin'ny maha-mpikambana ny firafitry ny habakabaka, ny tohatra miodina vy dia iharan'ny fanenjana, ny fitetezana, ny fihenan-kery ary ny hery axial, ary sarotra ny endriny. Ny famolavolana tohatra miolikolika dia hisy vokany hafa ihany koa noho ny endrika endrika samihafa ampiasaina.
Manaraka izany, andao hianarantsika ny endrika endrika mahazatra indrindra 2 - ny karazana tsanganana sy ny karazana lovia.
a. Karazan-tsanganana afovoany
Ny karazana tsanganana afovoany dia misy tsanganana fantsom-by, lovia fanitsakitsahana mpiorina vita amin'ny takelaka, takelaka vy ary lalantsara.
Ny fiaramanidina dia boribory concentric miaraka amin'ny tsanganana afovoany ho afovoany, ary ny endrika dia boribory elanelam-potoana telo-habe.
▲ Ny haavon'ny tohatra sy ny kisary
Toy izany koa, ny rafitry ny firafitra dia tohanan'ny tsanganana vy eo afovoany, ary ny tohatra tohatra dia alaina amin'ny tsanganana vy ho toy ny vatan-kazo cantilever ary voalamina manaraka ny fiolahana mihodina miakatra.
▲ Ny sary sclemikan'ny firafitry ny vy eo amin'ny tsanganana afovoany
Mandritra izany fotoana izany, ny anton-javatra toy ny haavon'ny gorodona, ny sakan'ny tohatra, ary ny karazana sosona ambonin'ny haingon-trano dia misy akony lehibe amin'ny famolavolana rafitra, noho izany dia ilaina ny mifandray amin'ireo mpamorona matihanina amin'ny rafitra vy mandritra ny fizotry ny famolavolana hiaraha-miasa sy hamoronana endrika mahafa-po. vahaolana.
▲ Rafitra firafitry ny tohatra
▲ Vokatry ny tohatra
Ny firafitry ny tsanganana afovoany dia be mpampiasa amin'ny trano sy ny any ivelany, ny atin'ny trano ho an'ny fifandraisana an-habakabaka ary ny any ivelany ho an'ny fampifandraisana avy amin'ny tany ambany mankany amin'ny gorodona sy tafo tsirairay.
▲ Ny tohatra dia be mpampiasa ao an-trano sy any ivelany.
Matetika izy io dia alamina amin'ny dingana 15 isan-kerinandro, ary ny karazana firafitry ny fotony dia azo ampiharina amin'ny habaka miaraka amin'ny haavon'ny 2.7 ~ 6m.
Steps Dingana 15 isan-kerinandro no mety
Raha jerena ny fiarovana sy ny fampiononana azo ampiasaina, ny mpandeha an-tongotra amin'ny ankapobeny dia manana ezaka bebe kokoa hidina fa tsy hiakatra rehefa mandalo izy ireo, ary mba hiantohana ny fiarovana ny mpandeha an-tongotra sy hahafahana mitazona ny lalantsara amin'ny tanana ankavanana rehefa midina dia mety ny diniho ny fametrahana ny lalantsara amin'ny lalamby amin'ny lalana miakatra amin'ny famantaranandro.
▲ Ny lalantsara misy lalantsara dia apetraka amin'ny lafiny famantaranandro miakatra amin'ny fiakarana.
b, Karazan'ny birao
Ny tohatra miolikolika karazana birao dia misy andry miolakolaka ao anaty sy ivelany, tranokely misy tombo-kase, takelaka ary arofanina.
Ny fiaramanidina dia voahodidin'ny boribory concentric 2, ary ny endriny dia fiolahana habe telo-habe hyperbolic.
Ny rafitry ny firafitra dia tohanan'ny andry boribory mivelatra, ary avy eo afindra amin'ny rafitra rafitra amin'ny faran'ny roa amin'ny zana-kazo (matetika dia ilazana ny rihana ambony sy ambany).
▲ Sarin-kevitra momba ny firafitry ny vy
▲ Ny vokatry ny tohatra
Ny firafitry ny takelaka dia ampiharina amin'ny trano anatiny indrindra, ary mety amin'ny habaka mitsangana tsy misy fivezivezin'ny tongotra.
Matetika, ny tariby anatiny dia 600 ~ 1000mm, ary ny isa ambony indrindra amin'ny tohatra tohatra isaky ny fizarana dia 18, ary raha mihoatra ny 18 dia ilaina ny sehatra fitsaharana.
▲ Ny faritra tsirairay amin'ny tohatra tohatra miisa 18 mihoatra ny dingana XNUMX dia mila mametraka sehatra fitsaharana
① Matetika ny tohatra miolakolaka dia tsy ampiasaina ho laharam-pahamehana.
②Ny sakan'ny sakan'ny lalantsara anatiny dia ≥220mm.
Height haavon'ny tohatra ≥ 2200mm, haavon'ny tohatra ≥ 900mm, sehatra 1050 XNUMXmm.
④Ny haavon'ny tohatra dia tsy tokony ho mideza be (mazàna latsaky ny 38 °), ny haavony sy ny sakany dia tokony hifanaraka amin'ny kaody takiana amin'ny karazan-trano mifanaraka amin'izany.
⑤ Rehefa manao rakotra haingon-trano eo amin'ny takelaka fanosorana, ny vato fisaka dia mila apetaka amin'ny rihitra simenitra, saingy mora ny "amponga" na ny "mipoaka" fisehoan-javatra, no nanolorana hevitra mba handinika ny fampiasana priming hazo.
⑥Na dia ny singa rehetra aza dia namboarina tamin'ny alàlan'ny fitsaboana anti-harafesina dia mety ho simba mandritra ny fizotran'ny welding, ka tokony horaisina ny saina amin'ny toeran'ny welding, ary ny loko anti-harafesina dia tokony hosodoko raha simba.
Fampiharana azo ampiharina amin'ny tohatra vy mihodina
Ny karazana tsanganana afovoany sy ny takelaka vy misy tohatra miolikolika dia azo ampiasaina hihaonana amin'ny fomba isan-karazany sy ny takiana amin'ny habakabaka amin'ny alàlan'ny fampiasana fitaovana haingon-trano (toy ny hazo, vera, marbra, sns.) Amin'ny toeran'ny dian-tongotra, lalamby ary bala.
a. fampiharana ny karazana tsanganana afovoany
Ny tohatra mihodina vy afovoany afovoany dia be mpampiasa noho ny asa kely misy azy.
Ny vy rehetra
▲ Natao ho an'ny ivelan'ny tranon'ny birao
▲ Natao ho an'ny trano anatiny ny biraon'ny birao
Fampifangaroana ny vatan'ny vy sy ireo fitaovana hafa
▲ Natao ho an'ny atin'ny hotely (vy + vera)
▲ Ampiharina amin'ny atin'ny tranon'ny birao (vy + vera)
▲ Natao ho an'ny villa ivelany (vy + vera)
▲ Natao ho an'ny villa anatiny (vy + hazo)
▲ Natao ho an'ny atin'ny birao fivarotana (vy + hazo)
▲ Natao ho an'ny atin'ny clubhouse (vy + marbra)
b. Fampiharana karazana takelaka
Raha ampitahaina amin'ny karazana tsanganana afovoany, ny tohatra mihodina vy karazana lovia no be mpampiasa kokoa noho ny endrika manankarena sy tsara tarehy kokoa.
▲ Natao ho an'ny magazay anatiny
▲ Natao ho an'ny club interior
▲ Natao ho an'ny atin'ny tranon'ny birao
▲ Natao ho an'ny atin'ny hotely (vy + hazo + marbra)
▲ Natao ho an'ny atin'ny clubhouse (vy + hazo + vera)
▲ Ampiharina amin'ny atin'ny fivarotana fanandramana (vy + hazo + vera)
▲ Natao ho an'ny atin'ny fivarotana lehibe (vy + marbra + vera)
▲ Natao ho an'ny birao anatiny (vy + hazo + vera)
▲ Natao ho an'ny atin'ny efitrano fampirantiana (vy + hazo)
▲ ampiharina amin'ny atin'ny tranombakoka kanto (vy + marbra)
c. Fampiharana mandroso ny rafitra fananganana fototra
Miorina amin'ny karazana tsanganana mahazatra sy ny takelaka takelaka, ny mpamorona dia afaka manitatra ny fikajiana ny firafitra vaovao sy ny endrika vy miorina amin'ny tohatra fiodinana, jereo ireto tranga etsy ambany ireto!
Fivarotam-boky Crowdsource ｜ Harbin
▲ Ny fizotry ny rafitra rafitra rafitra vaovao avy amin'ny karazana tsanganana afovoany
▲ Ny rafi-drafitra vaovao dia nalaina avy tamin'ny habaky ny faritra famakiana varingarina ho toy ny "tsanganana ivon-drafitra".
▲ Ny famolavolana dia mifototra amin'ny habaka famakiana boribory afovoany ho "tsanganana firafitra".
Ny volavola dia mampiasa ny habaka famakiana boribory afovoany ho toy ny "tsanganana firafitra", ary ny tohatra mihodina vy dia ampifandraisina amin'ny "tsanganana" amin'ny andry lava.
Ny tohatra dia toerana fitaterana hahatratra ny faritra miasa afovoany isaky ny gorodona, ary koa habaka fampirantiana misy rindrina mihodina, ary toerana fialan-tsasatra hiala sasatra, hamaky ary hijerena.
B: Trano biraon'ny trano fonenana ｜ Auckland, New Zealand
Ny rafitra "takelaka" miaraka amin'ny fiolahana tsy ara-dalàna dia ampiasaina.
▲ Ny endrik'ilay trano dia tsy mitovy amin'ny an'ny nentin-drazana.
Ny famolavolana dia fialana amin'ny tohatra mihodinkodina nentim-paharazana miaraka amin'ny ivon-toeran'ny boriborintany mitovy aminy, izay mandray kofehy tsy ara-dalàna sy rafitra "slab" sarotra kokoa noho ny habeny sy ny tsy fanarahan-dalàna.
Mandritra izany fotoana izany, ny loko mamirapiratra dia voafidy ho loko haingon-tohatra amin'ny tohatra, mahatonga ny tohatra mihodina ho teboka ifantohan'ny maso amin'ny habakabaka iray manontolo, mamorona atmosfera manaitra sy velombelona.
Ity misy kisary iray hamintinana ny atiny androany.
Previous :: Ahoana ny fiovan'ny tohatra miolikolika avy amin'ny famolavolana ka hatrany amin'ny fipetrahana? Next: Ny fiverenan'ny estetika momba ny fiainana atsinanana - Yuanhe Daqian
2021 / 08 / 15 5843
2021 / 08 / 14 5521
2021 / 08 / 14 6089